Budata Ultra Adware Killer maka Windows
Free Budata maka Windows (6.14 MB)
Budata Ultra Adware Killer,
Nilebara anya na ngwa ya di mfe ma bara uru maka Windows, Carifred na aru oru yiri ya ma nyere komputa aka na ngwa a na-akpọ Ultra Adware Killer. Ngwa a na - enyere gị aka wepu sọftụwia Adware gị na - emebi kọmputa gị. Ọ bụrụ na enwere akaụntụ ndị ọzọ na kọmputa ahụ, ọ gaghị adị mkpa ka ị mepee akaụntụ onye ọrụ ọzọ oge ọ bụla, nihi sọftụwia na-enyocha ha.
Na Ultra Adware Killer, nke na-ewepu ogwe ngwaọrụ, tinye-ons, ndọtị na ọchụchọ ọchụchọ achọghị na arụnyere na ihe nchọgharị, ị nwekwara ike tufuo ụdị Adware ndị weghaara mmalite mmalite gị. Karịsịa maka ndị ahụmịhe onye ọrụ ha ghọrọ ihe na-adịghị mma nihi mgbasa ozi ndị a na-achọghị na-agbanye mgbe ha na-asọgharị na ịntanetị, ngwa a ga-adị ka ọgwụ.
Ọ bụrụ na ịmaghị ụzọ ịkwesịrị iji kwurịta okwu mgbe ị na-eji ngwa ahụ, ọ ga-ekwe omume ijide nkwenye ojiji sitere na saịtị gọọmentị site na ịpị igodo F1. Ọ bụrụ na ị na-achọ a free na irè ngwọta, a na ngwa na-adọta uche na ya ngwa ngwa na-aga nke ọma arụmọrụ.
Ultra Adware Killer Ụdịdị
Nha faịlụ: 6.14 MB